Eyona shave ilungileyo kunye nonyaka webhola yekati kunye noWilkinson Hydro 5 | Amadoda aQinisekileyo
Yintoni i Inkqubo yeWilkinson HydroYintoni enegalelo ekuchebeni? Intengiso yeencakuba iyaqhubeka ukuqhubela phambili, kwaye iWikinson ibisungula isindululo sayo esitsha sehlabathi lokucheba.
Las Iincakuba zeWilkinson Hydro zimi kakuhle kuyilo lwazo, ergonomic kakhulu kwaye amagophe ajikelezayo. Isiphatho sayo sifutshane kwaye sincinci, ukuba sibambelele ngokukuko.
Phakathi phambili kule nkqubo zisinika, zezi:
Bakhe ii-blade ezintlanu ezibalekayo, kudityaniswe nemivalo yokukhusela abaLusu, ukunciphisa umngcipheko wokucaphuka.
Enkosi kuwe isixhobo sokuchaneka ngokuchanekileyo kweFlip Trimmer, isixhobo sokuhambisa ijeli sityhalelwa umva kancinci, ukuze ukwazi ukucheba ezona ndawo zinzima.
Kunye neyakhe inkqubo hydration, yasebenza ngamanzi, isixhobo sokuhambisa ijeli sivumela ukuba isilayidi sityibilike ukuqinisekisa ukuchetywa ngokupheleleyo.
1 Izabelo ezininzi kwelinye kunye noWilkinson Hydro
2 IHydro 5
3 Iinketho zonxibelelwano zeblade, ishevu esondeleyo
4 Unyaka omnye webhola yasimahla kunye noWilkinson Hydro
Izabelo ezininzi kwelinye kunye noWilkinson Hydro
IWilkinson Hydro blade blade inokuthathwa njenge-4 kwenye, oko kukuthi, yokucheba, hydrate, nentaba kunye utsheva.
Basika ukuthanda komsebenzisi, kusetyenziswa indlela ye- intloko esezantsi etshintsha kwiindawo ezahlukeneyo, ukuvumela ukuba ukhethe uxinano lokugqibela lweendevu.
Ukucoca amanzi kwenziwa ngenxa ijeli equlethe Aloe kunye Vitamin E, ebekwe entlokweni ephezulu. Le gel, xa idibana namanzi, iyakuthambisa ulusu, kuthintele ukucaphuka kungenzeki.
Njengoko sibonile, Ukwenza iprofayili kwenziwa kube lula xa utshevaKuba intloko engaphezulu kweebhleyidi inokuphoswa emva.
Xa kuziwa ekuchebeni, iincakuba zawo ezintlanu zisusa nayiphi na imikhondo yeenwele ngesibetho esinye, ishiya ulusu luthe kratya.
Imveliso inelo gama, "i-hydro ”, phakathi kwezinye izinto ngenxa yeqela lokuthambisa elibekwe ngaphezulu kweebhleyidi. Eli bhanti lifihla into yokuthambisa kulusu, kuyo yonke indawo yokucheba. Ulusu luthanjisiwe kwaye ngenxa yoko iimpembelelo zokuhamba kweebhleyidi azikho ndlongo. Isisombululo esifanelekileyo kumadoda anolusu olubuthathaka ebusweni, ukufumana ukucheba kakuhle kusondele ngelixa ukhathalele ubuso.
Inani lesi-5 libonisa inani lezinto okanye iincakuba ezenza le ncakuba isebenzayo. Ukuqhelaniswa kweebhleyile kuyilelwe kunye ukwahlukana okwaneleyo phakathi kwabo, Ukucoca ngokulula.
Ukupakishwa kweWilkinson Hydro kuyakhonzwa nayo inkxaso yokugcina incakuba xa ingasetyenziswa.
Iinketho zonxibelelwano zeblade, ishevu esondeleyo
Njengoko sibona, Umhlaba wonxibelelwano weWilkinson hydro razors uyahluka, enkosi kwithebhu ebekwe entloko, enokuthi ihanjiswe ngokwendawo esifuna ukuyicheba. Ukuze iindawo ezinzima kakhulu ukudlula (ezinje ngesilevu okanye phantsi kwempumlo), i-tab ingasuswa. Ngale ndlela, indawo yokudibana incinci kancinci; nangona kungekho hydration ngelo xesha, kodwa kuyenzeka ukulawulwa okukhulu kweekona ezinzima.
Unyaka omnye webhola yasimahla kunye noWilkinson Hydro
Ukunikezelwa kukaWilkinson Hydro unyaka wolonwabo kubathandi bebhola. Ngenyathelo elitsha lokuTyhila kunye nokuphumelela, ukongeza kwizibonelelo zokucheba okugqibeleleyo, ungonwabela unyaka webhola yasimahla. Ungayifumana njani?
Kuphela kufuneka uthenge i-razor ye-Hydro5, ngexesha lokunyusa, ukutyhila kunye nokukhupha iKhadi leHydro, ebekwe ngaphakathi. Ngayo, unako zikhulule izipho ezininzi.
Ukungena kwifayile ye- Iwebhusayithi yeHydro kunye nokufaka ikhowudi yekhadi, Unokukhetha phakathi kwamava ahlukeneyo, axhumene nehlabathi lezemidlalo. Ngumzekelo wemisebenzi ye-adventure enje Canyoning, ukunyuka intaba, ukunyuka, imidlalo efana neBodyBalance kunye nomdlalo wamanqindi, kunye neeseshoni zokuphumla ezinje, njenge Iipilates, iifisi okanye isekethe epheleleyo ye Spa.
Kovimba wejel razor esiyifumeneyo, kunokubakho ubuncwane bokwenene kubalandeli behlabathi lebhola. Ukuba ikhowudi yokuthengisa ifunyenwe kulondolozo oluchaziweyo, ibhaso eliwinileyo unyaka omnye webhola ekhatywayo yasimahla. Eli bhaso likwimo yevawutsha ukuya kuthi ga kwi-1.900 euro, ukuze kutshintshwe amatikiti kuyo yonke imidlalo ye-19 ethatha ixesha elinye kwiLigi yeDigodi yokuQala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » UWilkinson Hydro 5, oyena uchebe kakuhle kunye nonyaka webhola ekhatywayo
Yonke into ofuna ukuyifumana kukuhamba intaba
Indlela yokuzikhusela kwimitha yelanga